बर्गमिटर हेर्ने हो भने पनि नेपाल त सानै छ। झन ति ठुला ठुला चिन र भारतको बिचमा तचेप्टीएर बसेको छ। पृथ्वी नारायण शाह उहिले जन्मेको भएर तरुल भने,अहिले जन्मेको भएस्यान्डविच भन्थेहोलान। माखाको पित्त भन्दा सानो भए पनि आफ्नो देशको माया त जहां गए पनिहुन्छ। बिदेशमा बसे पछी त झन माया बढ्दो रहेछ। त्यसैले त प्राय अमेरीकामा बस्ने नेपालीको भीत्तामानेपालको झन्डा हुन्छ। ह्या मिनीसोटामा त झन एक जना दाइले घरकै कम्पाउन्डमा नेपालको बडेमानकोझन्डा फरफराएका छन। नेपालमा त झन्डा फरफराउन मन्त्री नै बन्नु पर्छ क्यारे । एक पटक को कुरो हो,तारा नाथ राना भाट,पहिलेका सभामुख,एक पटक मन्त्री भएका थिए। कांग्रेसमा ३६ तिरे लागेर खोइ कताहो जादै थिए बाटैमा मन्त्री पद खुस्केको खबर आएछ।त्यस पछि बाटैमा हतार हतार झन्डा निकालेछन।देश त मन्त्रीले ठेक्कैमा लिएको जस्तो, घाटा नाफा सबै ठेकदारलाइ। त्यसो भए अनि चुनाव चाहि टन्डर होला । साच्चै नेता त ठेकदार नै हुन कि क्या हो,त्यसैले त अन्तरिम संसदमा लिलाम बडा बड गरेर सिट बांडेका । लिलाममा पनि एमाले र माओबादीको झन्डै हिसाब नमिलेको! यस्ता हुतीहारा नेताको कुरो के गर्ने,भारतको रौ संग डराउछन,झन भारतले म्याउ गरे त फेन्ट नै हुन्छन होला।
नेतालाइ गाली गरे त सि.के लाल जस्ता भेट्रानले भांडा माझ्ने भन्लान। उनलाइ त भारतीयकै गुलाम गरेको मन पर्छ क्या अनि त उदाहरण पनि अमेरीकामा आएर केही नपाएर त्यही इन्डियन बफेकै कुरागर्छन। कति नेपालीले भारतिय संग कम्पिट गरेर सफलता हात परेको कथा कस्ले भन्दियोस,दिमागमा त त्यहीकरिशमाले सब बे मा स्यान्डविच पोको पारेको खबरले भरिएको छ। कान्तिपुरले नि के गरोस,त्यस्तै हिन्दी फिल्म स्टाइलको ढ्यास ढुस खबर नलेखे पत्रीकै बिक्दैन। अनि त सिकेहरुले अमेरीकामा भाडा माजेको नदेखे के देख्छन त ? झन्डै ओसियन सिटी पुगेनछन,नत्र अमेरीकामा रोटे पिगं खेलाउने देखी पिज्जा पकाउने पनि नेपालीले नै गर्छन भन्थे होला। ह्या हजारौं हजारको ट्युसन बिल तिनको घर बाट पठाइदिन्छन ?कि तिनले प्लेनको टिकट काटेर पठाएका थिए र भाडा नमाज्नु ? त्यही भाडा माज्न पनि २० घन्टा भन्दाबढि पाइदैन,बडो गुड्डी हाक्दा रैछन अमेरीका घुमेर ! अझ फाटा फट हात चलाएर भाडा माजेको थक थक लाग्छ रे, त्यसो भए माओबादी बनेर भटा भट गोली हानेको मन पर्छ होला ?
जि.आर.इ राम्रो गरेर बल्ल बल्ल एसिस्टन्ट सिप पायो, पे चेक बुझ्ने बेलामा त भारतीयको भन्दा कम! सानो देश भनेर थोरै पैसा दिनी हाम्लाइ भनेर करायो,तलब बाड्ने बुढि इन्डिएको ब्यपार सन्धी छ अमेरीकासंग पो भन्छे। नेपालको छैन रे त्यही भएर प्रत्यक पे-चेकबाट २५ डलर थप ट्याक्स काटेको। अनि त ति नेतालाइ गाली नगरे पुजा गर्ने त ? च्याटमा गाली नगर्ने रे ? त्यसो भए त्यो २५ डलर बढि तिर्नु पर्यो भनेर नेपालै बन्द गर्नु पर्ने होला ।
हो ब्रेन ड्रेन भाको हो। तर नेपालमा अस्पताल,बिध्यालय,कारखाना बन्द भएका त छैनन नि?भएकालाइ त काम छैन,अब बिदेशमा गएकालाइ गाली गरेर बस। २० जना मान्छे मागे २०,००० आबेदन पर्छ बिजुली अफिसमा,अनि नबिदेसिए तिनै नेताको भजन गाएर बस्नु त नेपालमा ? प्रसाद जति तिनै नेतालाइ,कार्यकर्ता फोकटमा भक्तजन। अब मान्छे एक किसींमको पशु हो भनेर पनि तिनलाइ दर्शन नै पढ्न पर्दो रहेछ, चोरेर पास गरेकि क्या हो ५ कक्षामा ? त्यही त लेखेको छ नि मानिसलाइ जनाबर जस्तै खाने बस्ने आवस्यक्ताहुने हुदा मानिस पनि एक किसिमको जनाबर हो भनेर। लौ यिनीलाइ फेरी पाच कक्षामा भर्ना गरिदिनु पर्यो।नत्र फेरी जाजरकोटमा माओबादीले भत्काएक झोलुगें पुल मर्मत गर्न पुग्लान। आचि गर्ने पनि आफै,सफा गर्ने पनि आफै,गए हुन्छ जाजरकोटमा पुल मर्मत गर्ने। मर्मत त गरौ आफ्नै पाखुराले,फेरी गोरो छाला संग हात फिजाएको सुन्न नपरोस।
खास त मैले सानो नेपालको बारेमा लेख्न खोजेको,तर साझामा सिकेको लेख टासेछन,कुरो अन्तै गयो। अब सानो नेपालको बारेमा अर्को पटक लेख्ने छु।
लऽऽऽ नमे ब्रो त बेपत्तै बत्तिएछन । सिकेआ कुरोले दह्रै घोचेको मानिचु के रे ।
जे होस बिदेशाँ बस्नीलाइ पनि सुख छैन, स्वदेशा'ट तो देखिन्न । कुरो तेइ हो ।
ट्याउस् ट्रीटिओ कुरो उप्काओ चै घत लाओ, यस्तो कुरोआँ हाउँरो एम्बेस्सिले तातो लाउनु पर्ने हो, तर खै । हुन त हाम्ले नेपालाँ ट्याउस् तिर्ने अर्या छैनम के रे, खैरेलाइ तो कुरा नि थाहा होला । नेपालाँ नतिर्या ट्याउस् यता मिनाहा अरिद्याओ भन्न के मिल्ला अस्तो लाग्या हो है मलाइ । इन्डेनहरले कसरी मिला'छन था' छैन । तिनेरु नि पाएसम्मन ट्याउस् तिर्ने जातका त हैनन गाँठे ।
नेपालीमा यौटा उखान छ नी "कुरा खस्रा मिठा"
तपाईले लेख्‍नु भएको कुरा सही छ, खाली नराम्रो कुरा मात्रै कोट्याउने नेपाली बानीमा कहिल्यै सुधार आएन हो ।
मानिसहरु नेपालीले अमेरीकामा भाँडा माजेको मात्रै देख्छन तर त्यहि भाँडा माझेर नेपाल भित्रीएको रेमिनटेन्सले नेपाल चलेको हेर्ने बेलामा र त्यहि भाँडा माझेर भए पनि सैयौंले उच्च सिक्षा हासील गरेको हेर्ने बेलामा तिनिहरुको आँखामा फुलो परेको हुन्छ ।
अरुलाई होच्याउन सजिलो हुन्छ परिश्रम गर्न गार्‍हो !!
Nepalese people are always biased when they write about Nepalese-American people. It is so sad :(. I have seen such things repeatedly.